Umngxunya omnyama othathwe yi-NASA ngenene yi-plasmoid: Martin Vrijland
Umngxunya omnyama othwethwe yi-NASA ngokwenene yiplasma yeplasma
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	3 Novemba 2019	• 4 Comments
Kwincwadi yam kungekudala yokupapashwa, ndiya kuthi, phakathi kwezinye izinto, ndithethe ngendalo njengoko sicinga ukuba siyayiqonda. Phakathi kwezinye izinto, ukuvela 'kwemingxunya emnyama' kuyaxoxwa. I-NASA isandula ukuveza "ifoto" yomngxunya omnyama. Kwividiyo engezantsi uza kuchazwa ukuba lo mngxunya umnyama usenokuba yiplasma yeplasma njani. Kubalulekile ukubukela ividiyo kunye nezinye iividiyo ezivela kwisitishi 'Iprojekthi yeThunderbolts'ukujonga. Okungakumbi malunga nencwadi yam ngaphakathi eyandulelayo iposti. Kungekudala ndiza kwenza owona mhla wokuhambisa.
Ucinga ukuba imithetho ethile yendalo isebenza ngaphakathi kwindalo njengoko siyibona, iluncedo ekufundisiseni i-theory kaImanuel Velikovsky. Iprojekthi yeThunderbolts eyenziwe yinzululwazi uDavid Talbott noWal Thornill, iye yazicacisa ngakumbi iimbono zeVelikosvky kwaye kwesi siseko siza neenkcazo ezichanekileyo ngemvelaphi yeeplanethi, ukwakhiwa, ubushushu kunye nomoya weplanethi. Kungenxa yokuba bacinga ukuba ngaphakathi kwendalo ebonakalayo ayisiyomali yomdalo kuphela, kodwa nerhafu yombane. Ngamafutshane, iiplanethi zihlawulwa ngombane. Ukuba basondele omnye komnye, ukukhutshwa kuya kuhlala kwenzeka, ukuze iplasma ibekho.
Kwimodeli yethiyori ekhoyo ngoku yendalo iphela, imingxunya emnyama isekwe kwingcamango ka-Einstein yokudibana kwakhona, ngaphandle kokujonga ukuba indalo (njengoko siyibona) ikwabizwa ngombane ngombane. Kwimodeli yase-Albert Einstein, ingcinga 'yemingxunya emnyama' yaqulunqwa. Into emangazayo kukuba imingxunya emnyama kule ithiyori iya kuba nzima kangangokuba bayithimbe yonke ubunzima kunye nokukhanya. Ngokwenkcazo, ukukhanya akukho kubuya kumngxunya omnyama kwaye ke akunakujongwa. Isayensi, nangona kunjalo, ibango lokuba basenokubona ukukhanya okujikeleze umngxunya omnyama kwaye ke i-NASA iboniswe kwi-2019 umfanekiso wokuqala wokukhanya ujikeleze umngxunya omnyama.
Ithiyori yobukho bemingxunya emnyama yingqokelela ye-hypotheses kwaye isayensi ithambekele ekubambeni ii-hypotheses zayo, kuba njengenxalenye yomtya oko kusekwe kwithiyori ka-Einstein Ukuwa, imbono yonke iqala ukubala.
Nangona kunjalo, imingxunya emnyama mhlawumbi ayikho. UWal Thornhill ucacisa kwingcaciso ye-YouTube apha ngezantsi ukuba le ifotwe yi-NASA yeyona plasmma. Iifom zeplasma plasmid embindini weendawo ezihlawulwe ngombane. Uvavanyo lwelebhu libonisa umfanekiso ofanayo nalowo wavela ne-NASA njengefoto yomngxunya omnyama.
Omnye umfanekiso oboniswe yi-NASA ngo-Okthobha i-2019 ngumfanekiso wekhompyuter obonisa imbonakalo yolo foto kwaye ke ayingomfanekiso wokwenyani, kodwa ngumzobo.
Imingxunya emnyama inokutsala kwaye ifumane yonke into kwaye ngokutsho kwayo iya kuba ngamacwecwe ukuya kobunye ubungakanani. Ezi zethiyori zingenakulindeleka, kuba umbuzo ngulo: iyaphi yonke loo nto?
Ngoku siyayazi (ukusuka ku uvavanyo oluphindwe kabiniukuba loo nto ibonwe njengomzimba kuphela kwaye indalo iphela ibekho ngenxa yesimo sengqondo; Imbono evela 'kwindawo yokwazi ukuqaphela'. Ngomngxunya omnyama, into ngequbuliso ibingasayi kuphawulwa, enokuthelekiswa ne-pixel efileyo kwiscreen. Eminye yemithetho yemvelo isebenza ngaphakathi kokulinganisa, nangona kunjalo, kwaye ukuhlawuliswa kombane kwindalo iphela yinto engabalwa ngu-Einstein. Ukulungiselela incwadi, kubalulekile ukuba ukhangele oku ngaphambili.
Inkolelo yomhlaba-flat isingenangqondo ukubeka iingcamango eziphambili kwikhonkco edibeneyo
Indalo yindalo kunye neelwimi zesiHebhere iqulethe ikhowudi ye-geometry eyiyo
Indlela iNASA izama ngayo ukwandisa indalo
"Inyani njengoko siyibona" ​​incwadi uMartin Vrijland ngoku ikhoyo
tags: David Talbott, ngombane, eziziimbalasane, isango, imingxunya, Immanuel Velikovsky, NASA, plasmoid, Iprojekthi yeThunder, Ehlabathini, Wal Thornill, abamnyama, abamnyama
3 Novemba 2019 kwi-17: 58
Bendingayi kujonga ngamehlo yonke into ekhutshwa yi-NASA, bekungqinwe izihlandlo ezininzi kwixesha elidlulileyo ukuba bahambisa iifoto kunye nevidiyo. Ngokubhekiselele kwi-einstein, uTesla wayeqonda ngcono i-wat
3 Novemba 2019 kwi-22: 27
Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka usoloko ujonga yonke into esuka kwaNasa kwaye uyitshekishe kabini. Kubekho abalawuli abanjengoBilly Wilder noStanley Kubrick abaye baxoka kwihlabathi ukuza kuthi ga ngoku ngokuhlela imifanekiso yefilimu nenkohliso. Kodwa awunakuthetha nto ngayo.
4 Novemba 2019 kwi-02: 34
Ikhoyili yeTesla kunye nesiphumo seHutchinson sele sibonisa ukuba okusingqongileyo kuhlawulelwa ngombane kwaye ke kunjalo kumhlaba wamandla. Amandla encopho ye-Zero kumnandi ukudlala nayo.
17 Novemba 2019 kwi-16: 32
« Ukubulawa kabini kukaGina noMarinin ePathé cinema Groningen
Amaziko lolutsha avakalisa umsindo malunga nobundlongondlongo ngenxa yokuba 'ukukhathalela' kuhlukumeza? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.395.172